Moqups: Qorshe, Naqshadeyn, Qaab -dhismeed, iyo Wada -shaqaynta Wireframes -ka iyo Jeegaanta Faahfaahsan | Martech Zone
Talaado, September 21, 2021 Talaado, September 21, 2021 Douglas Karr
Mid ka mid ah shaqooyinka runtii lagu raaxeysto oo buuxiya ee aan lahaa ayaa u shaqeynayay sidii maareeyaha wax soo saarka ee meheradda SaaS. Dadku waxay dhayalsadaan hannaanka looga baahan yahay inay si guul leh u qorsheeyaan, naqshadeeyaan, tusaaleeyaan, iskana kaashadaan is -beddellada ugu yar ee adeegsadaha.
Si loo qorsheeyo astaamaha ugu yar ama is-beddelka is-beddelka adeegsadaha, waxaan wareysi la yeelan doonaa dadka aadka u culus ee madasha sida ay u adeegsadaan oo ula falgalaan madasha, u wareystaan ​​macaamiisha mustaqbalka sida ay u adeegsan doonaan astaamaha, ugala hadli lahaayeen xulashooyinka kooxaha dhismaha iyo dhammee naqshadeeyayaasha fursadaha, ka dibna samee oo tijaabi tusaalooyinka. Habsocodku wuxuu qaadan karaa bilo kahor intaan xarigga siligga loo gudbin wax soo saarka. Markii la horumarinayey, waxaan sidoo kale ku qasbanaa in aan ku jeesjeeso shaashadaha shaashadaha iyo suuqgeynta alaabta.
Lahaanshaha madal lagu hormarinayo, wax lagu wadaagayo, laguna wada shaqaynayo jees jeesadu aad bay muhiim u ahayd. Waxaan jeclaan lahaa inaan helno madal u fudud oo u dabacsan sida Moqups. Iyada oo lagu jeesjeesayo internetka iyo aaladda fiilada sida Moqups, kooxdaadu waxay:
Dardar geli Hanaankaaga Hal -abuurka - Ka shaqee hal xaalad hal abuur leh si aad u ilaaliso diiradda kooxdaada iyo dardargelintaada.
In ay ka qayb qaataan Dhammaan Daneeyayaasha - Maareeyayaasha wax soo saarka, Falanqeeyayaasha Ganacsiga, Naqshadeeyayaasha Nidaamka, Naqshadayaasha iyo Soosaarayaasha - dhisidda is -afgaradka iyo wada -hadalka si cad.
Ka fogow daruuraha - waqti kasta iyo aalad kasta - iyada oo aan dhib ku qabin soo dejinta iyo soo dejinta faylasha.
Aynu si degdeg ah u dalxiis tagno Moqups.
Naqshad - Fiiri Fikraddaada
Bal qiyaas, tijaabi, oo ku ansixi fikradahaaga silsilado silig deg -deg ah iyo jeesjeesyo faahfaahsan. Moqups waxay u saamaxaysaa meheraddaada inay sahamiso oo ku celceliso sida kooxdaadu u dhisayso dardar-si aan kala go 'lahayn uga dhaqaaqaysa lo-fi una hi-fi marka mashruucaagu kobcayo.
Qorshee - Samee Fikradahaaga
Qabso fikradaha oo tilmaan ka bixi mashaariicdaada qalabkayaga sawir -xirfadeedka. Moqups sidoo kale wuxuu awood kuu siinayaa inaad abuurto khariidado goob -joog ah, sawir -gacmeedyo, loox -sheekooyin - oo aad si hagar la’aan ah ugu dhex booddo jaantusyada iyo naqshadaha si aad shaqadaada ugu dhigto mid isku habboon.
Tusaalaha - Soo Bandhig Mashruucaaga
Abuur tusmo shaqaynaya adiga oo ku daraya is dhexgalka naqshadahaaga. Moqups waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay iska dhigaan waayo-aragnimada adeegsadaha, soo bandhigaan shuruudaha qarsoon, helaan dhammaad dhintay, oo ka helaan saxiixa ugu dambeeya dhammaan daneeyayaasha ka hor inta aysan maalgelin horumarinta.
Iskaashi-Xidhiidh Waqtiga-dhabta ah
Qof walba ku hay isla bogga, adiga oo bixinaya warcelin marxalad kasta oo habka naqshadeynta ah. Maqal codadka oo dhan, tixgeli dhammaan xulashooyinka-oo samee is-afgarad-adiga oo tafatirka ku sameeya waqtiga-dhabta ah isla markaana si toos ah uga faallooda naqshadaha.
Moqups waxay leedahay hab -dhismeed buuxa oo agab ah oo ku jira hal jawi naqshad, oo ay ku jiraan:
Jiid oo tuur walxaha -Si dhakhso leh oo fudud maktabad dhammaystiran oo widgets iyo qaabab caqli badan leh.
Stencils diyaar u ah in la isticmaalo -Ka xulo xirmooyin isku-dhafan oo isku-dhafan oo loogu talagalay app-ka gacanta iyo naqshadeynta webka labadaba-oo ay ku jiraan macruufka, Android, iyo Bootstrap.
Maktabadaha Icon -Maktabad la dhisay oo leh kumanaan Icon Sets oo caan ah, ama ka dooro Font Awesome, Design Material, iyo Hawcons.
Soo Deji Sawirada -Soo dejiso naqshado diyaarsan, oo si dhakhso leh ugu beddelo tusaalooyin is-dhexgal leh.
Tafatirka Shayga - Dib -u -habeyn, wareegto, is -waafaji oo qaab walxaha - ama beddel shay iyo kooxo badan - oo leh aalado caqli badan oo firfircoon. Isbeddel weyn, dib u magacow, quful, iyo walxaha kooxda. Ka noqo ama ku celi heerar badan. Si dhaqso leh u garto walxaha, u dhex mari kooxaha buulka leh, oo rog rog muuqaalka - dhammaantood waxay ku jiraan Guddi -hoosaadka. Isbeddel sax ah ku samee shabakadaha, taliyayaasha, hagaha-caadooyinka, isku-darka-isku-darka, iyo aaladaha isku-dhejinta degdegga ah. Miisaanka, iyada oo aan lumin tayada, oo leh soo -dhoweyn vectorial.
Maktabadaha Font - Ka xulo boqolaal xulasho font oo leh xarfo Google isku dhafan.
Maareynta bogga - Awood leh, dabacsan, iyo Maaraynta Bogga. Jiid oo tuur bogagga si aad si degdeg ah dib ugu dalbato - ama ugu abaabusho faylalka dhexdooda. Qari bogagga ama faylalka - kuwaas oo aan aad ugu diyaarsanayn xilligii hore - adigoo gujinaya si fudud jiirka.
Bogagga Masterka - Waqti u keydi adoo ka faa'iideysanaya Bogagga Master -ka, oo si otomaatig ah ugu codso wixii is -beddel ah dhammaan bogagga la xiriira.
Atlassian - Moqups waxay leedahay taageero la heli karo oo loogu talagalay Server -ka Isku -dhafka, Server -ka Jira, Cloud Cloud, iyo Jira Cloud.
In ka badan 2 milyan oo qof ayaa durba u adeegsanaya Moqups app -ka iyo naqshadeynta websaydhka iyo xarig -jarka!
Samee Koonto Moqups BILAASH ah
Shaacinta: Anigu waxaan ku xirnahay Moqups waxaana isticmaalayaa xiriiriyadayda maqaalkan oo dhan.
Tags: naqshadeynta barnaamijkajilitaanka appiskaashinaqshadojaantusyadaqulqulka qulqulkajees jeesmocopsmaaraynta wax soo saarkaprototypesjilitaankasabuuradauikhibrada isticmaalahainterface interfacearagtidanaqshadeynta barnaamijka webkaqaabeynta boggaxirmooyinka xargaha